Amaqoqo ezinqwaba angasebenzisa izindlela ezahlukahlukene zokulethwa kwenqubo. Ezinye zazo zisebenzisa ukucindezela ngokweqile noma ukucindezela okuphikisayo ukusiza ukuvikela ubuqotho besitsha ngesikhathi senqubo (okusho: ukugcina iphakheji ekuqhumeni njengoba izinga lokushisa nengcindezi yakha ngaphakathi kwesiqukathi ngesikhathi senqubo). Iziqukathi eziqinile, njengamakani wensimbi, zingamelana nokwehluka okukhulu phakathi kwengcindezi yangaphakathi nangaphandle kwesiqukathi, ngakho-ke lezi zinhlobo zeziqukathi ngokuvamile azidingi ukucindezelwa ngokweqile. Zingacutshungulwa endaweni eyi-100% egcwele isitimu ngaphandle kokusebenzisa ukucindezela ngokweqile ngesikhathi sezigaba zokushisa. Ngakolunye uhlangothi, iziqukathi ezibuthakathaka nezimo eziqinile azikwazi ukumelana nokwehluka kwengcindezi ephezulu, ngakho-ke umoya wethulwa endaweni yokubuyisa ukuze unikeze ukucindezelwa ngokweqile ukugcina ubuqotho bephakeji ngesikhathi senqubo. Lezi zinhlobo zeziqukathi zidinga izindlela eziyinkimbinkimbi ngokwedlulele zokulethwa kwenqubo njengokufafaza amanzi, i-cascade yamanzi noma ishawa yamanzi, ukucwiliswa kwamanzi noma izinhlobo zohlobo lomoya. Ngoba umoya uyisivikelo, indlela yokugqugquzela noma yokuxuba inqubo yemidiya ekubuyiseleni kuyadingeka ukugwema izindawo ezibandayo emshinini, ngaleyo ndlela kuqinisekiswe ukusatshalaliswa okuhle kwezinga lokushisa kulo lonke i-retort nomthwalo womkhiqizo. Lokhu kuhlangana kufezwa izindlela ezahlukahlukene zokugeleza kwamanzi ezibalulwe ngenhla, noma nge-fan uma kwenzeka ukubuyela emuva kwe-steam-air, kanye / noma ngokushintshana kokufaka / isigubhu esimweni semishini yesitayela eshukumisayo.
Ukucindezelwa ngokweqile kubalulekile ezigabeni zokupholisa zenqubo yokubuyisa ngoba njengoba amanzi okupholisa efakwa endaweni yokubuyisa, iyawa umusi owenziwe ezinyathelweni zokushisa. Ngaphandle kokwethulwa okwanele kokucindezelwa komoya ngesikhathi sokupholisa, ingcindezi ekuphindaphindweni kwehle ngokungazelelwe ngenxa yokuwa kwesitimu ngaleyo ndlela kudale isimo se-retort. Uma lokhu kwenzeka umehluko wengcindezi phakathi kwendawo engaphandle nendawo yokushisa / yengcindezi engaphakathi kwesitsha iba nkulu kakhulu ngaleyo ndlela ibangele ukuthi isitsha siqhume (okunye okubizwa ngokuthi “ukubhoboza”). Ukulawulwa okuqondile kokucindezelwa ngokweqile ngesikhathi sezigaba zokuqala zokupholisa kubalulekile ukugwema lesi simo esingenhla kepha ukucindezela ukuthi ingcindezi yehle ezinyangeni zokugcina zokupholisa kubalulekile futhi nokugwema ukuchoboza isitsha (noma okunye okwaziwa ngokuthi "ukwendiselwa") njengokushisa ingcindezi ngaphakathi kwesiqukathi iyaphela. Ngenkathi inqubo yokubuyisa ingasebenzi noma ibulala amagciwane, ayiqedi zonke izinto ezonakalisayo ezincane. Ama-Thermophiles amabhaktheriya akwazi ukumelana namazinga okushisa ngaphezu kwamazinga okushisa ajwayelekile wokubuyisa. Ngalesi sizathu, umkhiqizo kufanele upholiswe phansi ube sezingeni lokushisa elingaphansi kwalapho lezi zinto eziphilayo zizokhiqiza khona, ngaleyo ndlela kubangele ukonakala kwe-thermophilic.